Kooxda Goodir aya a manta 1-0 kaga badiyay kooxda xidigaha cirka cayaar ahaayd munaasibad
You are here: Home somal Kooxda Goodir aya a manta 1-0 kaga badiyay kooxda xidigaha cirka cayaar ahaayd munaasibad
Kooxda Goodir aya a manta 1-0 kaga badiyay kooxda xidigaha cirka cayaar ahaayd munaasibad loo dabaaldagayay sanadguurada ciidanka poliska Somaliland oo ka dhacday garoonka weeyn ee Hargeisa Stadium.
Cayaartan oo aad u xiisa badnaayd ayaa waxaa ka soo qaaybgalay Gudoomiyaha Naadiga Godir Saciid Ismaaciil, waxaa kaloo marti sharaf ku ahaa manta cayaaryahanadii hore ee Madbacadda Qaranka gaar ahaan Nuur Amiin iyo saaxiibkiis ka garabcayaari jiray Xassan waraabacadde(Ataroos).
Cayaartan oo aad u adkaayd qaab cayaareedkeeduna aay isu dhaweeyd oo labada kooxoodba aanay waxba iskula harin maadaama aay koob loo dhgay munaasibadan.
Daqiiqadii 50 aad ee qaaybtii dambe waxaana goolkaas u dhaliyay cayaaryahanka caanka ah ee Haaybe oo nombarka 11aad uga cayaara Goodir(poliska) waxaayna cayaartii ku soo gabagaboowday 1-0 aay guushii ku raacday koobkiina hantiyay Naadiga Goodir.
Nuur Amiin oo wax laga weeydiiyay heerka kubadda cagta ee labada naadi ayaa qiray in aay soo bandhigeen cayaar aad noo raaligalisay waxaanan hubaa in hadii aay halkaa ka sii wadaan aay gaari doonan heer aay ka cayaaraan wadamada bariga iyo bartamaha waxaa kaloo uu Nuur sheegay in aay tahay markii u horeeysay ee uu yimaado Somaliland indhihiisana ku arkay heerka aay marayaan una rajeeynayo mustaqbal wanaagsan kubadda Somaliland.
Ugu dambeeyntii waxaa koobkii gudoonsiiyay Naadiga Goodir Xassan waraabacadde oo ah rug cadaa sporti.